kaspersky keys ​အ​သစ်​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျွန်​တော် kaspersky keys ​တွေ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​ပြီ. ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ကျွန်​တော်​လဲ ​ပျက်​ကွက်​မှု​တွေ ​ပေး​ဆပ်​မှု​တွေ ​တစ်​နေ့​ထက်​တစ်​နေ့ ​လျှော့​လျှော့ ​လာ​တဲ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ ​အ​မာ​ခံ ​နည်း​ပ​ညာ ​လေ့​လာ​သူ​များ ​အား​လုံး​ကို ​တောင်း​ပန်​ချင် ​ပါ​တယ် . ​ဒီ​နေ့ kaspersky keys ​အ​သစ်​တွေ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
​အ​ချိုင်း May 5, 2010 at 10:22 PM
် ​ကျ​နော် live CD ​သုံး​ပြီး C ​နဲ့D ​ကို ​ဖော​မက်​ချ​လိုက်​ပါ​တယ် ​ပြီး​တော့ ​ဝင်း​ဒိုး​ပြန်​တင်​ဖို့xp sp2 ​ခွေ​ထည့်​ပြီး ​ဘု​ခေါ်​တဲ့​အ​ခါ NTLDR missing ​ဆို​ပြီး​တော့ ​စာ​ကြောင်း​နဲ့ Press ctl+alt+del to restart ​ဆို​ပြီး ​ပေါ်​လာ​ပါ​တယ် ​ဝင်း​ဒိုး​ပြန်​တင်​ဖို့ ​ဘု​ခေါ်​တိုင်း ​ဒီ​လို ​ပဲ ​တက်​တက်​လာ​တယ် ​အ​ကို ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရ​မယ် ​ဆို​တာ ​အ​ကြံ​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ် ​ဒေ​တာ​များ​ပြန်​ရ​ယူ​လို​ခြင်း​မ​ဟုတ်​ပါ ​ဝင်း​ဒိုး ​ပြန်​တင်​ရ ​နိုင်​ရန် ​အ​တတ်​နိုင်​ဆုံး​လေး ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​လို့.. ​ထာ​ဝ​ရ ​အား​ပေး​နေ​တဲ့
HboneKyaw May 14, 2010 at 6:08 PM
​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ။ ​ကျ​နော် Memory Stick ​မှာ mgy.exe ​ဆို​တဲ့
Kasper ​နဲ့ ​စစ်​တော့​လည်း ​တွေ့ ​ပြီး​တော့​သတ်​မ​ပေး​နိုင်​ဘူး။
Stick ​ကို Format ​လည်း​ချ​လို့ ​မ​ရ​ဘူး။ Write Protect ​ဆို​တဲ့ Error ​တတ်​နေ​တယ်။ ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​မ​သိ​လို့​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး။ ​ဘယ်​လို​သတ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​သိ​ရင်​ပြော​ပြ​ပေး ​ပါ​ဦး။ ​သတ်​နိုင်​တဲ့ Software ​လေး​ဘာ​လေး​ရှိ​ရင်​ပေး​ပါ​ဦး။